Hoggaamiyaha Xisbiga Mucaaradka ee Wadajir oo kabaha la dul-maray madaxda dalka Somaliya, ‘Madaxda Dastuurka ayay ku tumanayaan’! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Hoggaamiyaha Xisbiga Mucaaradka ee Wadajir oo kabaha la dul-maray madaxda dalka Somaliya,...
Muqdisho (Halqaran.com) – Hoggaamiyaha Xisbiga Mucaaradka ee Wadajir Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame, ayaa weerar afka ah ku qaaday dowladda Federalka Soomaaliya, xilli uu ka hadlaayay Xanibaadii lagu sameeyay Madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed.
Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ayaa qoraal uu soo dhigay Boggiisa xiriirka Bulshada waxa uu ku sheegay falka lagu xanibay Shariif inay tahay wax ka fog qaranimada Somaliya, islamarkaana ay muujinayso sida madaxda Dastuurka ugu tumanayaan.
Qoraalka uu soo dhigay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur boggiisa xiriirka Bulshada ayaa waxa ay u qornayd sidan.
Waxaan si xooggan u cambaareynayaa xayiraadda safar ee loo geystay madaxwaynihii hore ee Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmad, wafdigiisa iyo shacabkii maanta Kismaayo u dhoofayey. Sheekh Shariif wuxuu halgankiisa siyaasadeed ka soo billawday soo deynta wiil ardaydiisa ka mid ah oo xorriyaddiisa laga qaaday, maantana waxay joogtaa in isaga xorriyadda socodka laga qaado.
Madaxda dalka Dastuurka ayay ku tumayaan
weerar Afka ah dowladda Sooomaaliya
Xisbiga mucaaradka ee Wadajir